I-Dortmund iDayari yeDayari- Iingxelo zobantwana beeNje zeNkwenkwezi nezeNkwenkwezi
Ikhaya tags IDortmund iDayari yeDlalo
Tshintsha: iDortmund yeDlalo yeDlalo
Siyakwamkela kwiDormund yeDlalo yeDlalo yeBantwana yeeNdaba zeBantwana kunye ne-Untold Biography. Apha, senze ukuba bafumaneke kubafundi, ukufezekiswa kweeMpahla zangoku kunye ne-Classic Dortmund zeBhola zeNkwenkwezi eziye zidla umdlalo omnandi webhola lebhola.
Ngaphandle kokungathandabuzeki, uBorussia Dortmund uye wenza umdlalo webhola kwaye abalandeli bawo bayaziqhenya. Abadlali bamanje kunye neklasiki bafanelekile ukuba babe kwi-Football Diary of Fame yethu.
I-LifeBogger inikezelwa ngokuzisa bonke abafundi bayo, iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo kunye neenkcukacha ezivela kumabhola ebhola bebhola. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi phambi kobomi, ubomi bentsapho, ubuhlobo bentsapho, iingxabano kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch into eyaziwayo malunga nabo.
Ewe, abaninzi abalandeli bebhola baye bafunda ezininzi ngamakhono abo. Kodwa kuphela bambalwa isandla abaye baqwalasela iincwadi zabo zeeBographies kunye neNdaba zabaNtswana ezinomdla kakhulu. Ngoku kungenasiphi i-adieu eyongezelelekileyo, siye saqulunqa imifanekiso yethu kunye nomxholo wakho kuzo zonke iziqhamo zayo.
I-Biology yaseRoma yethu yaseBurki ikukhonza zonke iinkcukacha zeBali lakhe lobuNcinci, uBomi boKuqala, abaNtu, iiNqaku zeSapho, uBomi boNothando (Intombazana, Umfazi), uMntwana (uS), uLisiko kunye ...
Ibali lethu le-Thorgan Hazard Biography ibonelela ngendaba epheleleyo yobomi bakhe boBuntwana, uBomi boKwangaphambili, abazali, iiNqaku zeSapho, Umfazi, abantwana, uBomi boBuntu kunye neNdlela yokuphila. Yi...
Ibali lethu leManuel Akanji Biography ibonelela ngendaba epheleleyo yobomi bakhe boBuntwana, uBomi boKwangaphambili, abazali, iiNqaku zeSapho, Umfazi, abantwana, uBomi boBuntu kunye neziBineko zokuPhila. Ngu ...
Ibali lethu le-Raphael Guerreiro Biography yeNqaku libonakalisa isigubungelo esipheleleyo sebali lakhe loBuntwana, uBomi boKwangaphambili, abazali, uSapho, Umfazi, abantwana, uBomi boBuntu kunye neZinto eziPhilayo. Ngokulula ...
Ukuqala, igama lakhe lesidlaliso ngu "Daxo". Inqaku lethu likunika isigubungelo esipheleleyo sebali lobuDan-Axel Zagadou, iBhayiloji, amaNqaku oSapho, uBazali, uBomi oBuQalayo, ubuNtu boMhlaba, ...
Ewe!, Ubizwa ngokuba "nguCaptain America". Inqaku lethu likunika ingxelo epheleleyo yeBali laseGiovanni Reyna yobuntwana, i-Biography, iinyani zeSapho, abazali, uBomi boKudala, Indlela ...
Ukuqala, ubizwa ngokuba yi "Arra". Inqaku lethu likunika ingxelo epheleleyo yeAchraf Hakimi Ibali lobuNcinci, i-Biography, iinyani zeSapho, abazali, uBomi bokuqala, ubuNtu, ...
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo le-Genius yeBhola eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "I-Sheva eNtsha". Ibali lethu lika-Andriy Yarmolenko ...
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oguqulwe: nge-15 kaMeyi ngo-2019 0
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngamagama omnxeba; "I-New Zlatan" okanye "iGiraffe". Incwadi yethu ye-Aleksander Isak Ibantwana ...
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loMphathi webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso esithi "UNjingalwazi". Ibali lethu leThomas Tuchel yabantwana kunye kunye ...